Ngiyikhipha kanjani iphrinta ye-OneNote ku Windows 10? - I-Onenote
Main > I-Onenote > Susa iphrinta ye-onenote - izixazululo ze-pragmatic
Susa iphrinta ye-onenote - izixazululo ze-pragmatic
Ngiyikhipha kanjani iphrinta ye-OneNote ku Windows 10?
KanjaniUkususa Iphrinta ye-OneNote?
Vula uhlelo lokusebenza lwe- Izilungiselelo ku-I-Windows 10Nina.
Zulazulela ku-Amaphrinta& Ama-scanner atholakala kumenyu yezilungiselelo.
Uzokwazi ukubonaI-OneNotengaphansi kwesithi 'Umbhali Wezincwadi ze-XPS' futhiIphrinta ye-Microsoftukuze PDF '.
Xazulula inkinga lapho ungakwazi ukuphrinta ngemuva kokubuyekeza Windows 10 buyekeza noma thuthukisa.
Amanye amaphrinta we-HP angahle angahambisani nokwakamuva Windows 10 buyekeza noma thuthukisa. Uma ungeke ukwazi ukuphrinta noma ukuskena ngemuva kokuvuselelwa kwe-Windows 10, yenza Landela lezi zinyathelo ukuqinisekisa ukuthi iphrinta yakho ixhunyiwe futhi iyaphrinta futhi. Ukuze uqalise, qala kabusha ikhompyutha yakho okungenani kanye ngemuva kokubuyekeza Windows 10.
Chofoza inkinobho engezansi kwesokunxele sasekhaya. Bese uchofoza isithonjana senethiwekhi bese ukhetha Qala kabusha. IWindows manje izoqala kabusha.
Ngemuva kokuqalisa kabusha ikhompyutha yakho, zama ukuphrinta idokhumenti futhi. Uma iphrinta isazoxhuma, hlola izinkinga zokuhambisana. Ukubona ukuthi iphrinta yakho iyahambisana yini, iya ku-support.hp.com.
Chofoza Thola Windows 10 amaphrinta ahambisanayo bese ucindezela u-Enter. Chofoza isixhumanisi se-Windows 10 esihambisanayo. Skrolela phansi kohlu ukuthola iphrinta yakho.
Uma iphrinta yakho ihambisana neWindows 10, ungasebenzisa umhlahlandlela wesinyathelo nesinyathelo kusuka ku-Microsoft Windows Troubleshooter ukukhomba, ukuxilonga, nokulungisa izinkinga nge-Trouble Shooter, vula ikhasi elisha lesiphequluli se-Google Chrome, bese ufaka phezulu kwalesi sikrini I-URL ibaluliwe. Ukulanda kuzoqala ngokuzenzakalela. Chofoza ukulanda ukuze uqale bese ulandela imiyalo esesikrinini.
Lapho uhlelo lokusebenza luqala, khetha 'Amaphrinta'. kusuka ohlwini lwezinketho bese ucindezela 'Okulandelayo'. Landela yonke eminye imiyalo esesikrinini ukuxilonga nokuxazulula izinkinga zakho zokuxhumeka.
Uma izinkinga ziqhubeka, khipha bese ufaka kabusha abashayeli bephrinta nesoftware. Okokuqala, khipha ikhebula le-USB phakathi kwekhompyutha nephrinta. Ku-Windows, thola Faka noma Susa Izinhlelo.
vula amawindi we-winmail.dat
Chofoza Izinhlelo Nezici. Skrolela phansi kohlu lwezinhlelo ezifakiwe. Chofoza ukugqamisa imodeli yakho yephrinta ye-HP, bese uchofoza Khipha.
Bese uchofoza inkinobho yokukhipha isusiwe, qala kabusha ikhompyutha yakho. Manje yisikhathi sokulanda nokufaka kabusha inguqulo yakamuva yesoftware ephelele yephrinta. Iya ewindini elisha lesiphequluli Iya ku-123.hp.com bese ulanda inguqulo yakamuva yesoftware yephrinta.
Mina Ewindini lokusesha, thayipha inombolo yemodeli ngqo noma igama lephrinta yakho. Bese uchofoza isithonjana Sokusesha. Ekhasini lokufaka iphrinta, chofoza inkinobho yokulanda.
Landela imiyalo ukuze uqede ukufaka amadrayivu nesoftware. Uma unezinkinga zokuphrinta, zama i-Windows System Restore. Ukwenza ukubuyiselwa kwesistimu, landela izinketho zokubuyisa ze-Windows 10 ku-support.microsoft.com.
Kungani iphrinta yami iya ku-OneNote?
Uma kwenzeka kubaI-OneNote, okhethekilephrintadriver Kufakiwe okuvumela ukuthi uthumele ifayela lakho le-phrintaimisebenzi njengezithombe kuI-OneNoteizincwadi zokubhalela. Okwakhoiphrintaisoftware ayihambelani nohlelo lwakho lokusebenza futhi iWindows ibuyele ku-Send toUkuphrinta kwe-OneNotedriver njengokuzenzakalelayoiphrinta.
Sawubona futhi wamukelekile esiteshini se-AT Center PAL se-YouTube, nginguJustin futhi namuhla ngizohamba ngidlule i-OneNote.
insiza ye-cldflt yehlulekile
Ngakho-ke into yokuqala okufanele uyenze ukuya ku-App Store bese ufaka iMicrosoft OneNote. Futhi uma usuyifakile i-OneNote, uzoyivula. Ngakho-ke ikufolda yami ye-Microsoft, futhi lesi yisithonjana esibubende lapha.
Futhi sizokuchofoza ukuyivula. Uma usuvule i-OneNote, uzocelwa ukuthi ungene ngemvume. Ngakho-ke ngizokukhombisa ukuthi isikrini sokungena sibukeka kanjani uma usivula.
Uzocelwa ukuthi ufake ikheli lakho le-imeyili, lilandelwe yiphasiwedi yakho. Uma usufake lezo zinto ezimbili, usukulungele ukusebenzisa i-OneNote. Ngakho-ke lapho sibuyela emuva njengoba ubona uzobingelelwa ekhasini elifana nelami.
Sengivele nginomsebenzi othile kwezinye zezifundo zami ngakho-ke sizokuziba lokho okwamanje. Futhi ngizongena kulokho kamuva. Ngakho-ke sizofaka incwajana entsha oyichofoza ekhoneni elingezansi kwesobunxele lapho ithi khona ne-notebook, futhi kulokhu kukhombisa sizoyibiza ngokuthi yincwadi yokubhalela.
hlukanisa i sec
Futhi-ke sizoshaya u-'Dala 'futhi manje njengoba ubona ukuthi senze incwajana entsha. Ayinazo izinto eziningi njengebhuku lami siqu, kepha kunesigaba kuyo yonke incwajana bese kuba namakhasi esigabeni ngasinye. Ake sithi ufuna ukwakha isigaba esisha, ungakha isigaba esisha sekilasi, ungakha isigaba esisha samanothi, empeleni noma yini empilweni yakho yansuku zonke.
Ake sithi i-psychology bese ushaya nje ukungena. Futhi ake sithi usesifundweni sakho sokuqala sokusebenza kwengqondo futhi ufuna ukubhala amanothi njalo ngesonto. Manje njengoba usudale isigaba, uzodala ikhasi.
Ngakho-ke sizocofa lelo khasi elingagagulwanga igama bese uchofoza phezulu kakhulu bese sithi kungenxa yezinjongo zokubonisa, ake sithi ngoMsombuluko Ephreli 2, amanothi. Futhi manje mane uchofoze ngezansi bese uqala ukuthatha amanothi wamaphoyinti ezinhlamvu, ungadweba, ungangenisa izithombe. Ngizokukhombisa konke lokhu ngemizuzwana embalwa.
Ngakho-ke lesi umhlahlandlela oyisisekelo sokwenza incwajana, ukudala isigaba, nokwakha ikhasi. Manje ngizokukhombisa amanye amathuluzi ukuze ukwazi ukuthayipha njenge-Microsoft Word, ngakho-ke lena incwadi yokubhalela yokuhlola. Ungagqamisa ifonti ngaphezulu kwesobunxele bese uyishintsha ngendlela othanda ngayo.
Amanye amafonti adinga ukulanda, kepha inqobo nje uma uxhumeke kuxhumano olungenantambo, ungafinyelela kalula kuwo. Ungashintsha usayizi wefonti, uwenze ube nesibindi, ithalikhi, dwebela, udabule phakathi, ushintshe umbala uye kunoma yini oyifunayo, gqamisa, wenze uhlu olunamachashazi, wenze uhlu lwezinombolo, singakwazi ukuhlehlisa, singaqondanisa isikhungo, kwesobunxele noma kwesokudla futhi singenza izitayela zokushintsha nokunye njalonjalo. Ngokulandelayo ungakwazi ukunamathisela izinto.
Ngakho-ke ungafaka amatafula, izithombe noma uthathe izithombe. Ake sithi usekilasini futhi ufuna ukuthatha isithombe ebhodini. Vele uchofoze kwikhamera bese ikhamera ivula bese uvele uthwebule isithombe salokho okufunayo.
Ungakha futhi amafayela alalelwayo, unamathisele amafayela, futhi wakhe ukuphrinta kwe-PDF kusuka ku-OneNote yakho. Manje isici esilandelayo sihle impela uma unepeni le-Apple noma ipeni noma umunwe wakho ukudweba ku-OneNote. Njengoba ukwazi ukubona kunemodi yombhalo, i-lasso, okukhethiwe kanye nakwesokudla kwalokho okusula, inqwaba yezimpawu, isigqamisi, nezinye izimpawu ezinhle ezipholile.
Ngakho-ke simane sichofoze kumaki oyisisekelo futhi ungadweba noma yini oyifunayo, noma kunzima ukubhala ngomunwe wakho, kepha ukujwayele. Ungaqokomisa ukumakwa okunemibala ehlukene. Uma uqhafaza kabili kukamaki, ungashintsha umbala walowo maki uye kunoma yiluphi usayizi ongalucabanga.
Ngakho-ke manje ngizokukhombisa incwajana yami. Encwadini yami yokubhalela nginezifundo engizithathe lapha eCurry, ezibandakanya ezempilo, ukubhala, ezengqondo, ukufunda izindaba ezimfishane nokubhala, ukuxhumana nabantu, kanye nezinhlelo ezihlelekile. Futhi amanothi we-iPAL amanothi we-iPads.
Isibonelo esihle kakhulu se-OneNote yami yisayensi yokusebenza kwengqondo. Ngakho-ke amanothi ami engqondo ahlelwe isonto nesonto, futhi yonke imikhakha ongayibona lapha noma wonke amakhasi ongawabona lapha yisonto elihlukile, ngakho-ke sinenani eliphelele lamasonto amabili amathathu amane amane ayisithupha ayisithupha ayisikhombisa. Lesi bekuyisifundo sasehlobo ngakho-ke besishesha kakhulu, kodwa ngikuhlele ngokweqile nge-OneNote.
Njengoba ukwazi ukubona, isonto lokuqala kwakungoLwesibili ngoMeyi 23, 2017 futhi ngesikhathi sekilasi ngangimane ngibhala amanothi. Ngigqamise ezinye zezinto ezibalulekile ebengicabanga ukuthi ziyathakazelisa bese kuthi ngesonto elilandelayo ngoMeyi 30th ngibhale ukuthi uprofesa ukusho ngomlomo futhi ngikugcine kuhlelekile ngokweqile. Ezinye izinto ezifana nekilasi lami lezempilo, angizange ngithathe amanothi amaningi, kodwa ngazama ukusebenzisa i-OneNote ukudweba izinto.
I-Psychology isivele yenziwe nezindaba ezimfishane sengizenzile amanothi. Kepha yebo lena yi-OneNote, ngiyabonga kakhulu ngokubuka le ndatshana. Uma unemibuzo, sicela ushiye amazwana ngezansi noma uze esikhungweni se-AT ukuze uthole usizo ngobuchwepheshe bakho bokusiza.
Iphrinta ye-OneNote isetshenziselwani?
Lapho ufaka iMicrosoft Office 2013, ufake i-virtualiphrintaebizwa ngokuthi Thumela KuI-OneNote2013. Ungasebenzisa le virtualiphrintaukukopisha umbhalo wanoma yiliphi ifayela ungene ku-I-OneNote, kuqala kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza.I-OneNoteubiza umbhalo okopishiwe ngokuthi 'ifayili eliphrintiwe.'
Ngingayisusa kanjani i-OneNote njengephrinta ezenzakalelayo?
Lapha ngizokukhombisa ukuthi ungayisusa kanjani i-OneNote esethwe njengephrinta ezenzakalelayo. Izinyathelo zokwenza lokhu yilezi: Vula Amasethingi. Chofoza Amadivayisi. 2. Kusuka kufasitelana lesokunxele, khetha ama-Printers nama-Scanners. 3. Kusuka kufasitelana langakwesokudla, khetha i-OneNote ohlwini lwamaphrinta atholakala kuma-Printers & amp; izikena 4. Khetha Susa idivayisi.
Ngisetha kanjani iphrinta yami ukuthi ngiyithumele ku-OneNote?
'Ukucushwa Kwamakhompyutha' - & gt; 'Okuncamelayo' - & gt; 'Izilungiselelo zePhaneli Yokulawula' - & gt; 'Amaphrinta'. Qhafaza kwesokudla bese ukhetha okuthi 'Okusha' - & gt; 'Iphrinta Yasendaweni'. Zonke ezinye izinketho zizompunga, ngaphandle kwenkambu yegama. Setha igama njengo-'Thumela ku-OneNote '(kufanele uyiqambe kahle ukuthi iphrinta ibizwa kanjani kumadivayisi naku-Printers). Kungabizwa ngokuthi 'Thumela ku-OneNote 2013'
Ngisusa kanjani i-OneNote ku-Windows 7?
Cindezela u-'Win-X 'ukuvula imenyu yamathuluzi esistimu yeWindows, bese ukhetha' Iphaneli yokulawula. ' Ku-Windows 7, chofoza inkinobho ethi 'Qala', bese ukhetha 'Iphaneli Yokulawula.' Chofoza u-'Hardware ne-Sound, 'bese uqhafaza ku-' Devices and Printers. ' Qhafaza kwesokudla 'Thumela ku-OneNote 2007' bese ukhetha 'Susa Idivayisi' ku-Windows 8 noma 'Susa' ku-Windows 7.
Ingabe iphrinta ye-OneNote ingasuswa kukhompyutha eyabiwe?
Ngicabanga ukuthi inkinga ukuthi njengoba sisebenzisa iSharepoint ne-Office365 umsebenzisi ngamunye uthola imbobo yephrinta ye-OneNote ngokuzenzekelayo futhi iningi lamakhompyutha ethu kwabelwana ngalo. Siphoqa amakhophi endawo wamaphrofayela ukuthi asuswe emishinini ekuphumeni ngemvume nge-GPO, kepha lokhu akubonakali kususa amaphrinta abo. Sicela ubheke isithombe-skrini sami.